Download Rooti for Windows Alternative si samee DVD Movies
> Resource > Windows > Download Rooti ugu fiican ee Windows Alternative 8/7 / Vista / XP
Rooti waa xidhmo oo dhan-in-ka mid ah warbaahinta loogu Mac in loo abuuray by Roxio. Rooti markii ugu horaysay la sii daayay January 2009. Hadda nooca ugu dambeeya waa 11. Waxa ay u ogolaataa in aad qabato wax kasta si loogu badalo iyo wadaagaan warbaahinta. Laakiin codsi u fiican oo caynkaas ah uma shaqeeyo labada Windows 7, Vista, ama XP. Waa maxay nixi ah! Haddii aad tahay user Rooti ah, ama qaab xoogga Rooti, ​​waxaad u baahan tihiin Rooti u dhiganta u Windows.
Hambalyo! Waxaad tahay meel sax ah. Waxaan ugu Wondershare talinaynaa Video Converter for Windows 8/7 / Vista / XP / 2000. Waxay leedahay sifooyinka la mid ah sida kuwa la dubay, iyo yimaado la taageero weyn oo loo dhan qaabab video oo caan ah, dayanayaan DVD, qoraalana video, video online, taageero, dhammaan qalabka la qaadi karo, iyo in ka badan. Waa kama dambaysta ah oo dhan-in-mid video iyo DVD xal u Windows.
Maxaad Dooro Rooti for Windows Alternative
Dabcan, waad sugi kartaa in la sii daayo rasmiga ah ee Roxio Rooti u PC. Laakiin Anigu ma arag jadwal la qorsheeyey meel kasta. Hoos waxaa ku qoran sifooyinka muhiimka ah ee Rooti naga talinayaa in kale Windows. Waxaa laguu u siiyo isku day ah? Download u dhiganta Rooti Windows hadda.
Beddelaan iyo gubi kasta video in Windows 8/7 / Vista / XP
The Rooti u dhiganta Windows taageeraa oo dhan qaabab video caan ah oo loo isticmaalo by video bixi, fiidiyo video, iPhone video, iwm wax kasta oo qaab weelka yahay, waxaad had iyo jeer dajiyaan karaa in Video Converter Ultimate si loogu badalo oo ayan u hurin si aan DVD kaaftoomi kasta. Ayaa ah qaabab video taageeray waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn MOV, MP4, M4V, AVI, FLV, wmv, 3GP, ASF, MKV, mod, AVCHD, RMVB, iwm
Waxaa intaa dheer, waxaa kuu ogolaanaya in aad si toos ah u qoraan videos ka qalab video Qabsashada ama video goobaha internetka sida YouTube. Videos qeexidda Sare ayaa sidoo kale taageeray.
DVD-aragnimo caadiga ahayan,
Waxaad ka heli habka ugu fudud ee ay gubaan warbaahinta aad digital in DVD leh tayo sare leh. Labada DVD5 (4.7G) iyo DVD9 (Dual-lakabka, 7.9g) waxaa taageera. Waxa kale oo aad ku gubi karaa video inay DVD folder, ama ISO files leh arrimo DVD menu free bixiyo in la sameeyo DVD aad u gaar ah.
Looma baahna in la baadhi ku wareegsan, waayo waxa qaabab video haboon yihiin qalab aad. Illaa iyo 100 aaladaha si buuxda taageeray. Waxaad had iyo jeer ka heli kartaa profile ah horena u qalab aad. Waxaa Dooro iyo badalo video inuu ciyaaro qalab kasta oo aad rabto.
Beddelaan kasta video 2D in 3D fudayd
Haddii aad tahay enthusiast 3D, Tani waa muujinta la yaab leh. Haddii aadan, 3D ugu danbeyn noqon doona maalin uun loo jecel yahay. Sida gunno kale oo dheeraad ah, Video Converter Ultimate sidoo kale loogu badalo video in 6x xawaaraha si dhakhso ah ay ka faa'iidaysanaya buuxa ee processor multi-muhiimka ah iyo Intel Core ah, Nvidia Cuda, teknoolajiyada AMD. Badan oo ku saabsan 2D Baro diinta 3D.
FAQs u Rooti Windows
1. Ma jiraan ah "Rooti" u dhigma u Windows 7?
Sure. Taasi waa sababta maqaalkan waxaa lagu daabacay. Waxaan Video Converter Ultimate ee Wondershare si dabiici ah talinaynaa Windows ay gubaan DVD disc in Windows 8/7 / Vista / XP / 2000. Iyadoo qasabno yar, waxaad gubi karaa video iyo sawiro si DVD ciyaarta ciyaaryahan kasta oo DVD guriga.
2. Sida loo furo file rooti ah in Windows 7?
Waxaad isku dayi kartaa beddelo kordhin filename in uu * .iso oo bal eega hadday Rooti kor ku Windows u furi doonaa. Waxaad si fiican u samayn lahaa nuqul ah faylka asalka ka hor inta aadan magaca it.Since Rooti oo keliya ka shaqeeya Mac, habka ugu fiican in la furo file rooti ah waa in la isticmaalo Rooti by Roxio.